Myanmar Gays Heaven: မန္တလေးက သီဟ (၂).....အသက်က ၂၂နှစ်ပါတဲ့
Posted by Myanmar Gays Heaven at 8:41 AM
chanmyae thaw April 2, 2014 at 3:16 AM
သူ့ အကောင့်လေးရနိုင်မလားဗျ ..ရှိရင်ပေးပါအုံးဗျ
09×××××××× :-P :-P
ကြိုက်​သွားပီ ခိုက်​သွားပီ လာထားအာဘွား
Anonymous April 2, 2014 at 4:50 AM
မိုက်တယ်ကွာပုံပိုင်ရှင်ဘယ်ကလဲ top လား bot လား ver လား သိချင်တယ်ဗျား phနံပါတ်လေပေးပါလား request ပါ
Anonymous April 10, 2014 at 11:40 PM
Anonymous April 2, 2014 at 5:29 AM
ချစ်​စရာ​လေး ပုံကျတင်​ထားတယ်​ ဖုန်း နိမှတ်​နဲ့ 
Gmail ​လေး​တော့ေ၇း​ပေးသင့်​တာ​ပေါ့ မျက်​လုံးအစာ​ကျွေးရုံဘဲလား plz plz သီဟ​လေး​ရေ :-)
Plz give me ph no or gmail ..plz
Anonymous April 3, 2014 at 11:51 PM
Hello, homo သူငယ်​ချင်းများအားလုံး သင်္ကြန်​ မှာ​ပျော်​ရွှင်​စွာ​ရေကစားနိုင်​ကြပါ​စေလို့ thuha99877@GMail.com ကဆု​တောင်​​ပေးတယ်​ဗျ
09400454589 bot ပါ
09354355085 .do u live in yangon?
yankorlatt June 2, 2014 at 11:56 AM
ကို add လိုက်ပါ viber ည သုံး
fri ဖြစ်ချင် လို့ ပါ
kyue October 2, 2015 at 7:17 AM
မျိုးမင်း April 22, 2014 at 4:59 AM
bangkokburmese April 23, 2014 at 10:32 PM
Facebook: lwinlwinsaisai@gmail.com,vzo:goldenfaces,Viber+869752003,Line ID:moneykings
Anonymous April 26, 2014 at 12:23 AM
250672886 ငုံထားချင်ရင် ဆက်သွယ်ပါ
hero May 3, 2014 at 5:21 AM
0943199128 mdyပါ ဆက်သွယ်ပါ အသက် 21 ပါ အချိန်မရွေးပါ
may contact me loilembum@gmail.com
facebookmandalay May 19, 2014 at 12:46 AM
အခုဆက်သွယ်ပါ 0933729862 မန်ေးလးသားများဆက်သါယ်ပါ ခံချင်တယ်
မန်းလေးကပါဘဲ။ 43014186ပါ။ ရုပ်ချောပြီးခပ်တောင့်တောင့် man များနဲ တွေခြင်ပါတယ်။ viber ကနေဆက်သွယ်ပါ
မြစ် ကြီး နား က ရှိ ရင် ဆက် သွယ် လေ။
Kaung Ka Lay February 9, 2015 at 10:40 PM
Anonymous September 26, 2014 at 9:23 PM
သန်လျင်က top man များ ရှိကြလားဗျ အတည်တွဲခြင်းပါတယ် ကျွှန်တော်နဲ့ ရေစက်ဆုံးခြင်းရင် ဖုန်းနံပါတ်ထားခဲ့ပါ handsome ဖြစ်ပါတယ် အသက် ၂၅ အောက်သာ
Peter König October 26, 2014 at 8:44 PM
wow...yes Penis, email: p.Koenig116@gmail.com
ko zaw November 11, 2014 at 2:13 AM
မန်းလေးသားပါဘဲ ငါ့လီး က သူ့ ထက်ကြီးတယ်
ko zaw November 11, 2014 at 2:14 AM
အမှုတ်ခံချင်တယ် မန်းလေးသားတွေ ရုပ်ချောသူလေးမှကွာ
sweetlover December 14, 2014 at 4:10 PM
Facebooko M Jin Saiပါ
sweetlover December 14, 2014 at 4:11 PM
Mdyကပါ လိပ်စာက၉၁လမ်း ၂၇ ၂၈ကြားပါ
Nanda Ko January 13, 2015 at 2:48 AM
09254277988, pls contact to me. i m bot .live in ygn
i am from ygn.
ph no 09974970534
09974970534 only viber
Ye Lin May 8, 2015 at 3:34 AM
Naing Tun June 27, 2015 at 8:09 PM
Minthuaung Minthuaung November 19, 2015 at 11:50 AM
Ygn top only ခံချင်​သူများဆက်​သွယ်​ပါ 09264593822
minye htet April 23, 2017 at 12:18 AM
mdy ver ချစ်သူအလိုရှိ